कस्तो समयमा महिलाहरुलाई शारिरीक समन्धको चाहना बढी हुन्छ तपाइलाई थाहा छ ? जानी राखौ – Krazy NepaL
November 5, 2020 1029
महिलाहरुलाई सारीरीक चाहना कुन समयमा बढी हुन्छ ? र कुन समयमा चरम सुख प्रापत हुन्छ? भन्नेबारे सोधिएको थियो । जसमा उनिहरूको उत्तर थियो – महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ ।
जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् । त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे । त्यस अनुसार, महिनावारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवासले बढी रमाइलो हुने कुरा बताएका थिए । यौन विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँच देखि सात दिनसम्म सारिरिक चाहना बढी हुन्छ । त्यस अनुसार, महिनावारी पछिको तीन दिनमा हुने सहवासले बढी रमाइलो हुने कुरा बताएका थिए ।
जानकारीको लागि यो पनि पद्नुहोला
यौ’न’ जिज्ञासा सँगै मानिसहरु यसको बारेमा थाहा पाउन पनि आतुर हुने गर्दछन् र मानिसहरुले धेरै प्रकारको गलत जानकारी पनि दिने गर्दछन् । यस्तै कौतुहलतालाई समाप्त गर्नका लागि पहिलो पटकको सेक्सको बारेमा हामी केहि जान्कारी दिन्छौँ । पहिलो पटकको यौ’न सम्पर्कका बारेमा मानिसहरुमा धेरै प्रकारको कौतुहल र जिज्ञासा उत्पन्न हुने गर्दछ ।
१– यदि पहिलोपटक सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ भने चरमोत्कर्षको आशा नराख्नुहोस् । यतिबेला एक अर्काको शारिरिक आवश्यकताको बारेमा जानकारी दिनुहोस् र लिनुहोस । २– यदि तपाईं आफ्नो पहिलो सेक्स धेरै राम्रो हुने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईं गलत सोच्दै हुनुहुन्छ । याद राख्नुहोस् यो तपाईंको लागि नयाँ अनुभव हो र यसका लागि तपाईं धैर्यवान् हुन जरुरी छ । तपाईंको पहिलो से’क्स अनुभव राम्रो नभएपनि यसमा डराउनु र आत्तिनुपर्ने छैैन किन भने यो समय सँगै राम्रो हुँदै जान्छ ।
३– महिलाहरुले पहिलो पटक से’क्स गर्दा आफ्नो पार्टनरलाई खुसी राख्नका लागि झुटो चरमोत्कर्षको कुरा गर्नुपर्दैन । यो तपाईंको पहिलो पटकको सेक्स भएका कारण तपाईंको पार्टरले तपाईंलाई बुझ्नुहुनेछ । ४– महिलाहरु माया दर्साउन लजाउने गर्दछन् । तर पहिलो पटक सेक्स गर्दा तपाईं पहल गर्नुहोस र उनलाई पर्खेर नबस्नुहोस् । यदि एक अर्काको मुख ताकेर बस्नुभयो भने पुरा रात नै बित्छ ।
५– धेरैजसो मानिसहरु पहिलो पटकको से’क्स गर्नुपूर्व फोहोरी गफ गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् तर यो सत्य होइन् । पहिलो पटकको लभ मेकिङको दौरान बिस्तारामा आफ्नो पार्टनरसँग तपाईं के चाहनुहुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दा पनि हुन्छ । ६– विश्वास गर्नुहोस् सेक्समा आकारको कुनै पनि भूमिका हुँदैन । महिलाहरुमा धेरैजसो यो भ्रम हुन्छ कि उनको पुरुषको आकार जति ठूलो हुन्छ त्यति नै उनीहरुहरु आनन्दित हुने सोच्दछन् तर यो सोचाई गलत हो । चरमोत्कर्षमा आकारको कुनै पनि महत्व हुँदैन ।
७– पहिलो पटकको से’क्स निकै पीडादायक हुने धेरै मानिसहरुको भनाई हुन्छ तर यदि ठिक तरिकाले फोरप्ले गरियो र तपाईं यसको लागि तयार हुनुहुन्छ भने पहिलो पटकको सेक्स निकै सजिलो र कम पीडादायी हुन्छ । ८–यदि तपाईं पोर्न स्टारजस्तो से’क्स गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईंको सोचाई गलत साबित हुनेछ । पोर्न फिल्ममा देखाइने धेरैजसो झुटो हुने भएकाले यसको पछि नलाग्नुहोस् । ९– पहिलो पटकको सेक्स धेरै लामोसम्म हुने कुरा गलत हो । त्यसकारण पहिलो पटकको से’क्समा कुनै उद्देश्य नराखी मात्र आनन्द लिने तरिकाले गर्नुहोला ।
Prevदलित भनि गाँउलेले पानी भर्न नदिएपछि श्रीमतीको लागि कुवा खन्यो ४० दिन लगाएर
Nextट्रान्स जेण्डर अनिताले खुलेर कुरा गरिन छाति देखि पिसाब फेर्नि सम्मको (हेर्नुहोस भिडियो)
आज १५ जेठ २०७८ शनिवारको राशिफल हेर्नुहोस् निकै राम्रो छ